i-South Africa iqonde ukusebenzisa izifundo kwi-T20 tri-series
Ama-Momentum Proteas alungiselela ukubhekana ne-England ne-New Zealand kwi-T20 International double-header yabo yokuqala njengoba i-Tri-series iqala e-Somerset ngoLwesithathu.
Umqeqeshi weqembu, u-Hilton Moreeng uthi i-series izoba inqubeko elungile lokuthi iqembu lilungiselele i-ICC Women’s World T20 eqala no-November e-West Indies. Izophinde ikhombise ukuthi iqembu likuphi uma libhekana nabadlali okuthiwa bahamba phambili kuma-T20 emhlabeni okwamanje.
“Amamlungiselelo ahamba kahle,” eqhubeka. “Sibheke kakhulu kuma-ODIs njengeqembu, kunezinto ezimbalwa esizikhombile okumele sizilungise. Kodwa uma sibheka phambili kwimidlalo elandelanayo, lokhu kuzoba okokuqala lapho esizodlala khona kwi-series efana nalena, okwenza kujabulise.”
“Kukushintsha uhlobo lwekhilikithi kuhle kithina ngoba abadlali bayayithanda ikhilikithi yama-T20 kakhulu. Uhlobo olufushane oludinga ukuthi amakhono alunge. Sibhekene namaqembu amabili ahamba phambili, okuzokwenza kubengcono kakhulu kithina ukuhamba futhi siziphosele inselelo kanye nokuzizwisa ukuqina okuzodingeka uma siya kwi-World T20.”
u-Moreeng uyathemba ukuthi iqembu lakhe selidlulile ekuhlulweni ngo-2-1 kwi-ODI series bedlala ne-England futhi bayiqinele ngomgqondo i-tri-series ezayo. Umqeqeshi uthe ukuba nesikhathi sokuzibheka nokuthi bawenzekuphi amaphutha ne-England, ama-Proteas akulindele ukusebenzisa izifundo abazifundile.
“Uma sibheka i-series esahlulwa kuyo, yebo asiyinqobanga, kodwa amakhono ebekhona. Kuningi okuhle esingakuthatha kuyona futhi sikulethe kule-series,” echaza.
“Uma kuyiwa kuma-T20 siyazi ukuthi wonke amaqembu anamandla nokuthi kudingekana ukunqoba. Kungenzeka noma yini, ama-overs angu-20 kuphela. Kuhamba nokuthi ubani osukwini ozokwenza okujwayelekile kahle, asebenzise amakhono akhe futhi umqondo ukhululeke. Ingxenye esikhula kuyo njengeqembu futhi uhlobo lwekhilikithi esifuna ukubangcono kuyo njengoba singayidlali kaningi ngokuthanda kwethu. Abadlali bayilindele inselelo futhi balibhekile ikusasa nokubona ukuthi badlala kanjani.”
Iphepheni i-South Africa ineqembu elingahamba phambili kwikhilikithi yama-T20 kodwa ukuhlulwa ukungashintshashintshi kugcina iqembu ekufikeni ezingeni eliphezulu. u-Moreeng ukholwa ukuthi ushintsho oluncane olungashintsha inhlanhla yeqembu futhi kwabenze iqembu elihamba phambili kwikhilikithi yomhlaba.
“Sineqemu eliphosa kahle emhlabeni kodwa ekupheleni kosuku, kumele wenze isiqiniseko sokuthi uwasebenzisa kahle amakhono akho ngosuku. Okukodwa ukuba, futhi okunye ukuphuma uye enkundleni futhi wenze umsebenzi,” esho umqeqeshi.
“Ngasekushayeni, akhona amakhono, kuhamba nomsebenzi osukwini. Kumele sibe nesiqiniseko sokuthi imisebenzi enjalo ayishintshi futhi umuntu emunye futhi neqembu, sihamba ndawonye. Uma ubheka i-ODI series ingxenye eyodwa ebisebenza futhi enye ingasebenzi, ngakho sidinza ukuzibeka kulesosikhundla lapho esiqala khona ukudlala kahle kuzona zontathu izigaba zomdlalo futhi sikwenze njalo. Sinekhwalithi kwigumbi lokushintsha ukuqhudelana kahle nalamaqembu kanye nokunqoba i-series.”
u-Kapp ucela ukukholwa njengoba i-South Africa ibheke ukunqoba umlando ngokunqoba u-Van Niekerk ocikekile ubheka ukuhlula i-England kumdlalo ocacisa nge-series Amakhulu ka-Taylor no-Beaumont asize i-England ilinganise i-series Moreeng praises Proteas women but wary of ‘wounded’ England as they look to clinch the series Ama-Proteas women angaphambili ngo-1-0 e-England Ama-Proteas women alungele inselelo enkulu ne-England u-Van Niekerk umangazwe ukuthola umklomelo omkhulu, wathi uyinikela eqenjini lakhe Ama-Proteas Women alindele ithuba lokubhekana ne-England futhi i-CSA imemezela iqembu lama-Proteas Women elizoya e-England Ama-Proteas women athola i-T20 series whitewash u-Luus no-Van Niekerk bahlela ukunqoba i-series kwama-Proteas women